बलिउड चलचित्र ‘ओरु अदार लभ’को गीत ‘मानिक्य मलाराया पूवी’मा आँखा झिम्क्याएर चर्चामा आएकी प्रिया प्रकाश विरुद्ध धार्मिक भावनामा ठेस पुर्याएको भन्दै मुस्लिम समुदायका युवाले दायर गरेको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीशद्वय ए एम खानविलकर र डी वाई चन्द्रचूडको संयुक्त इजलासले शुक्रबार खारेज गरेको छ।
प्रिया प्रकाश ‘मानिक्य मलाराया पूवी’ गीतको म्युजिक भिडियोमा आँखा झिम्क्याएर निकै चर्चामा आईन् । जुन भिडियोमा उनले आफ्नो प्रेमीलाई प्रभावित पार्न खोजेको दृश्य देख्न सकिन्छ । उक्त भिडियो निकै भाइरल भएको थियो । मुस्लिम युवाको समूहले भिडियो भाइरल भएपछि आपत्ति जनाउँदै १८ वर्षीया प्रियाविरुद्ध हैदराबादमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । उक्त उजुरीविरुद्ध प्रिया सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्। सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गर्दै उनलाई न्याय दिएको हो।
सो मुद्दा खारेज गर्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्रले अधिवक्ताहरुलाई सचेत गराए । उनले भने तपाईहरुसँग अरु कुनै काम छैन ? ‘कसैले गीत गायो भन्दैमा, आँखा झिम्क्यायो भन्दैमा तपाईहरु उजुरी गर्न आउने ? मिश्रको आक्रोश भारतीय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरे । चलचित्र ‘ओरु अदार लभ’ प्रदर्शनको पखाईमा रहेको छ ।